Edhisheni Timu - Yega-Inobatsira Rubatsiro
Kuzvibatsira Zviwanikwa yaive webhu purojekiti yakatanga muna 2010 nechinangwa chekusimudzira ruzivo rwunobatsira vashandisi vedu veInternet mune nyaya dze psychology, kuzvivandudza uye, sekutaurwa kwazvinoitwa nezita, zvinopa zviwanikwa zvekuzvibatsira.
Kana iwe uchida shanda nesu, zadza iyo inotevera fomu uye isu tichava nekutaurirana munguva pfupi.
Kana iwe uchida kuona iyo rondedzero yemisoro uye zvinyorwa zvatakagadzira panguva ino, unogona kushanyira iyo chikamu chechikamu pano.
Amai, mudzidzisi akasarudzika, psychopedagogue uye anofarira zvekunyora nekutaurirana. Anofarira kuzvibatsira nekuti kubatsira vamwe kwandiri inyanzvi. Ini ndinogara ndiri mukudzidza kunoenderera ... ndichiita kuda kwangu uye zvandinofarira, basa rangu. Unogona kushanyira yangu webhusaiti yako pachako kuziva zvese.
Sezvo ndaive mudiki ndaive pachena kuti chinhu changu kwaive kuve mudzidzisi. Nekudaro, ini ndine degree muChirungu Philology, kuitira kuti ndiise mukuita zvese zvandakadzidza. Chinhu chinogona kunyatsobatanidzwa pamwe neshungu dzangu dzepfungwa uye nekuenderera mberi nekuziva zvakawanda nezvese marudzi ese etsika nemagariro ane chekuita nekudzidzisa, chinova chishuwo changu chikuru.
Sezvo ini ndaive mudiki ndanga ndichinzwira tsitsi uye ndinofarira kucherechedza vanhu kuyedza kuvabatsira mumararamiro avo, mafungire ... Naizvozvo, kuva nezvimwe zviwanikwa zvinobatsira vamwe vanhu kuti vafare nguva dzose chinhu chakakosha. Uye kana naivowo vachitibatsira, zvakatonyanya.